Nhau - Sei uchifanira kudziya usati waita maekisesaizi?
Kuchinja kwemuviri wemunhu kubva panzvimbo yakanyarara kuenda kune imwe nzvimbo yekurovedza muviri kunoda kugadzirisa.Kugadzirira kudziya-maekisesaizi usati watanga maekisesaizi kunogona kuvandudza kunakidzwa kweiyo nerve centre uye cardiopulmonary basa, kuwedzera kuyerera kweropa kwemhasuru, kuwedzera tembiricha yemuviri, kuwedzera basa reiyo biological enzymes, kukurudzira metabolism, uye kuita kuwedzera kwemhasuru, tendon nemarunda zviri muchimiro chakanaka.Iko kupikisa kwemukati kunoderedzwa, kuitira kuti mabasa ezvikamu zvose zvemuviri zvibatanidzwe, uye hutano hwakanaka hwekuita muviri hunowanikwa zvishoma nezvishoma.
Kudziya usati waita maekisesaizi kunoita kuti majoini awedzere kushanduka nekuti inosimudza tembiricha yemuviri uye inowedzera majoini mafambiro, nekudaro kudzivirira kubatana, ligament, uye tsandanyama kukuvara.
Kudziya kusati kwaita maekisesaizi kunogona kubatsira kukurumidza kutenderera kweropa remuviri uye zvishoma nezvishoma kuwedzera tembiricha yemuviri.Kunyanya, kupisa kwemuviri wepanzvimbo kunokwira nekukurumidza panzvimbo yemitambo.
Kudziya muviri usati waita maekisesaizi kunogonawo kubatsira kurovedza muviri zviitiko zvepfungwa, kubatsira kudzora psychology, kumisikidza neural kubatanidza pakati peakasiyana mota nzvimbo, uye kuita iyo cerebral cortex mune yakanakisa mamiriro ekunakidzwa.
Kuita mabasa ekudziya-up kunogona kuwedzera metabolism yemhasuru tishu, kuwedzera kupisa kugadzirwa uye kuwedzera tembiricha yemuviri;kuwedzera kwekushisa kwemuviri kunogona kuwedzera metabolism, nokudaro kuumba "denderedzwa rakanaka".Muviri uri mumamiriro akanaka ekushushikana, izvo zvinoita kuti uite kurovedza muviri.Uye zvakare, tembiricha yepamusoro yemuviri inogonesawo kuburitswa kweokisijeni muropa kune tishu, kuve nechokwadi chekupihwa kweokisijeni nekuvandudza basa retsinga.
Zvinotora anenge maminetsi matatu kana zvakadaro kuti muviri uone kuti rakawanda sei ropa raunoda kuendesa kumamhasuru.Saka iyo yekudziya-up inofanira kugara inosvika 5-10 maminetsi uye inofanira kuperekedzwa nekutambanudza kwemapoka makuru emhasuru.